Guqula ukusuka kuGoogleEarth ukuya kwi-AutoCAD, iArcView kunye nezinye iifomathi- iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Guqula kusuka kwi-GoogleEarth ukuya kwi-AutoCAD, i-ArcView kunye nezinye iifom
ArcGIS-ESRIAutoCAD-AutoDeskGeospatial - GISGoogle umhlaba / imephu
Guqula kusuka kwi-GoogleEarth ukuya kwi-AutoCAD, i-ArcView kunye nezinye iifom
Nangona zonke ezi zinto zingenziwa ngezicelo ezifana Impawu, okanye i-ArcGis Ngokuvula nje i-kml kwaye uyithumele kwelinye ilizwe kwifomathi oyifunayo, ukukhangela kuGoogle kwe-kml ukuya kwi-dxf kuyanda. Masibone ezinye izinto ezenziwa ngumfundi kwiDyunivesithi yaseArizona simahla ukuguqula idatha ukusuka kuGoogle Earth ukuya kwiifomathi ezisetyenziswa zizicelo ezinje AutoCAD, Microstation, ArcView, ArcMap, IGPS y Excel
1 Guqula kwiGoogle Earth ukuya ArcView/ I-GIS (.shp)
Con le sicelo Unokukhetha uhlobo lwedatha yefayile yemilo (kml ukuya kwi-shp), amanqaku, imigca okanye iipoligoni, ikwavumela ukuba utshintshe ifomathi yolungelelwaniso lweefayile ze-kml (lat / long wgs84) kwezinye iifom, ezinjenge-UTM. Iziphumo ziifayile ezintathu ezisisiseko, i-.shp apho amanani akhoyo, i-.dbf apho ikhoyo idatha kunye ne-.sxf apho isalathiso somhlaba sikhona
2 Guqula kwiGoogle Earth ukuya AutoCAD (kml ukuya kwi dxf)
Con le sicelo Idatha ye-kml inokufumaneka kwifomathi ye-dxf (kml ukuya kwi-dxf), eyifomathi esemgangathweni onokuyivula nge-AutoCAD, Microstation kunye namanye amaqonga e-CAD. Unokukhetha ukufudusa idatha ngokwahlukeneyo (amanqaku, iindlela, iipoligoni) okanye zonke ngaxeshanye.
3 Guqula kwiGoogle Earth ukuya Excel (.csv, txt, ithebhu)
Lo sicelo ikhupha idatha kwifayile ye-kml kwaye iyikhuphe (x, y, z izilungelelaniso) kwifomathi ye-.csv onokuyivula ngokugqwesa, ikwavumela ukuba ukhethe ukuba indawo ekuya kuyo isicatshulwa (.txt) okanye isicatshulwa esahlukaniswe zizithuba (ithebhu) . Ikwavumela ukuba ukhuphele amanqaku endlela kunye neepoligoni ngokwahlukeneyo.
4 Guqula kwiGoogle Earh ukuya IGPS (kml ukuya kwi-gpx)
Nangona kunjalo le sicelo Unokwenza yonke imisebenzi yangaphambili, isebenza ngekhompyutheni kwaye inokukhetha ukuguqula .bln y .gpx eyifomathi eqhelekileyo yokufaka iGPS. Unokumisela kwakhona indlela yokulungelelanisa, ukhethe ingqikelelo, idatum kunye nommandla.
Eyona nto intle ngezi zixhobo kukuba simahla, okanye ubuncinci okwangoku. Abanye kufuneka usokole kancinci kuba ziimacros kunye neewindows okanye iisetingi zinokuba namanqanaba okhuseleko angabavumeli. Kananjalo ezinye azinakubaleka neenguqulelo zamva nje zikaGoogle Earth.
Njengoko athetha umdali kwezi zixhobo, ukuthanda kwakho ixesha lokuchitha kunye nokwabelana nabo akushiye imizuzu ukulungisa ezinye iibhugi, ukwenza iincwadi okanye ukuhlaziya abanye abaye badala.
Ukugqiba ukuphonsa iintyatyambo kule nxaxheba yeZonum, kukho ezintathu kunye kunye neGoogle Earth:
ver el Ukubalwa kwabantu eMelika kwiGoogle Earth
ver ukulungelelanisa kwinqanaba (lat / lon) kwi-UTM, kunye nommandla walo
ver ukulungelelaniswa kwembombo zomfanekiso oboniswe kwiGoogle Earth (ubukhulu), okwenzayo ukuba ungathathi amaphuzu kwi-chilazo njengoko senzayo xa sibona indlela yokuziphatha umfanekiso weGoogle Earth.
En eli thunyelwe lichazwe izixhobo ezahlukeneyo ezenziwa yiZonum kwi-Engineering, CAD kunye ne-GIS.
ArcView Umhlaba ka-Google GPS KML GIS asibonise shp
Wamkelekile kwiCartesia Xtrema
Ungayilanda njani imifanekiso esuka kwiGoogle Earth
Iiveki ze4 ezedlulileyo
Uluhlu lwesoftware esetyenziswa kwimvakalelo ekude
I-TwinGEO yesi-5 yoHlelo-Imbono yeGeospatial
Ngenye yezifanekiso ze Excel ezibonakala kule khowudi
Ingelosi G uthi:
Ndingayiguqula njani i-kml ukuya kwi-UT? ngaphandle kokuyenza nganye nganye, njengoko ndibonile kwamanye amaphepha.
Le template iboniswe kweli nqaku
Ivumela ukukwenza kunye nezilungiso ze-UTM, ukuzithumela kwi-kml leyo ifomathi yamkelwe yiGoogle Earth.
jose julian uthi:
Ndingathanda ukuba undixhase ngokundixelela ukuba ndiyakwazi ukulayisha iinqununu zamadigri, imizuzu kunye nemizuzwana kwaye ukuba ngaba kunjalo, okanye ukuba u-UTM kuphela ulungelelanisa
Zama iZonum, kukho isicelo esikwi-intanethi esikuvumela ukuba wehlise iindawo eziphakamileyo. Ukuba ufuna into eyomeleleyo, iya kuba nge-Plex.Earth ethoba imodeli yedijithali.
Sawubona! umntu andixelele indlela ngaphandle ulwazi kwendawo ukusuka google emhlabeni ukuze bayixube emisontweni ArcGIS, andinayo inkqubo AutoCAD, ndiyabulela kuwe, ndiyathemba ungenza nindincede, isiza abazithandayo kum weYucatán, Mexico.
Kukho inkqubo ebizwa ngokuba yi-3d indlela yokukhwela, enika izilungiso ngqo kwi x, y, z
Unokwenza njalo nayiphi na inkqubo, kuquka umthombo ovulekile njenge-gvSIG
luis enrique uthi:
Ndifuna ukukunceda ukuba ndiguqule iifayile ze-autocad kwi-Google umhlaba ukuya kwi-KLM kwaye andinakufumana ulwazi
Ndifuna ukuguqula i-autocad idatha ye-goart kwiifayile ze-KLM
Kole: Oko kuxhomekeke kwinto ofuna ukuyenza, njengoko idatha yakho ye-trackmaker ichanekile ngakumbi kuneGoogle Earth. Ukuba ufuna ukuba zihambelane nemifanekiso kaGoogle Earth, kufuneka uyiguqule kuqala.
Yaye yeyiphi indlela onayo? Phantse nayiphi na inkqubo ye-GIS ingathumela ngaphandle kwefomathi ye-shp
hello ndincede, ndifuna ukuguqula enye idatha ukusuka kwii-UTM izikhokelo ukuya kwi-SHP.
hello angathanda ukwazi indlela kunokusivala ukuba desface ukuba superimpose i shapefile kunye TrackMaker ku google emhlabeni .. ndiyaqikelela ukulungiswa isilungelelanisi Excel .. ukuba zonke ifayile imilo Kiera ngoko kudlula google .¿deberian mayilungiswe ngaphambili? okanye ngaba iya kuba yimiba yeeparitha? .. andiyazi. Ndile ngxaki. nceda uncede
Molweni .. Ndenza umsebenzi kwaye asinayo imilinganiselo yephondo lase-osorno ... abekho .. kwaye ndifuna ukubuza ukuba ndingabafumana njani kuGoogle Earth kwaye zeziphi iinkqubo ekufuneka ndikwazi ukuzenza .. basicela loo nto kwaye ayifumaneki. akukho ndawo…
Ndifuna ukuguqula iifayile ze-csv ukuze ngigqibe kwaye ngisebenze kwi-CAD
Yintoni okufuneka uyenze ukuze ufumane ukukhwa kwe-cyber. ihehe
Izibingelelo, kwaye silapha enkonzweni yakho.
Maria José uthi:
Abaninzi kodwa ngokubulela kakhulu, inyaniso kukuba le ndawo ikhulu 😀, ibusiso enkulu!
I-Google Earth idinga i-geographic idibanisa ne-wgs84 datum.
Ndicinga ukuba kule nto uthetha ngayo, i-xy zizilungelelaniso ze-utm, kunye nendawo ethile kunye nedatha ethile, kuya kufuneka uyifune loo nto. Kuya kufuneka uguqulele oku kulungelelwaniso lwejografi, yiloo nto ifunwa nguGoogle Earth.
Itheyibhile yokugqwesa endiyikhankanyileyo kwinkcazo yangaphambili yenza loo nguqulelo. Kwakhona qiniseka ukuba uyayiqonda i-utm kunye nolungelelwaniso lwejografi, kukho amakhonkco kwezi zihloko kanye apho.
Sawu, mbulela ngokuphendula, khangela, ndixhalabile ukuba kufuneka ndiyenze oku kulandelayo kwaye andizange ndiyenze (ndiphanda isihloko ngokuqala):
Andiyi kuguqula ifayile yefomathi kwiifayile ze klm.
Kuthekani ukuba kufuneka ndenze ukuba baya kudlula kum ulungelelwaniso "x" kunye "y"
esebenzisa i-arcview yesiza, emva koko kufuneka ndibale u-"x" kunye no "y" kuyo kodwa ezo kufuneka ndizibeke kugoogle emhlabeni ukuze ndibone eso siza.
Bandixelele ukuba izilungelelwaniso zesayithi azifani naso kwi-arcview njengokuba kwi-Google umhlaba kunye noko ndikufunayo kukuqala ngokubala okokuqala okanye ukufumana abanye.
Unokundinceda okanye ubonise apho ndifumana khona into endikunceda?
Ukuba ufuna ukuguqula izilungiso ze-UTM ukuya kwimihlaba, oko kungenziwa nge Excel
Ukuba ufuna ukuguqula ifayile kwifayile yefomathi kwi-klm, ungayisebenzisa fdo2fdo
Molo, ingaba unikwe ux kunye no-y ulungelelaniso lwe-arcview kwi-csv, igqwesile njl.njl, igqithise ukufumana ux kunye no-y banxibelelanisa kwenye i-csv, bagqwese njl njl kuGoogle Earth?
Ngamanye amazwi, ukuzibonakalisa ngcono kancinci, ukuba ndino x kunye no y banxibelelanisa indawo ethile kwi-arcview, ingaba sikhona isicelo okanye i-algorithm, njl. njl. endivumela ukuba ndifumane i-xe enokusetyenziswa ngugoogle umhlaba?
Ewe, unokukhupha umgangatho kwi-3D ukusuka kwi-Google Earth ngeMephu ye-AutoCAD
mira esi sithuba
UCarlos Gonzales Soria uthi:
Ingaba kukho nayiphi na isicelo sokufumana idatha ye-X, Y, Z kwiGoogle emhlabeni?
Cuanfo ngomkhombe ku google emhlabeni ukususa isalathisi unika kum uququzelelo ngezidumbu zabo, kanye njengokuba xa zoba rurta le projekthi njengento Imboniselo yabucala.
Ukuba kukho nayiphi na indlela yokufumana le nkcazelo, ndiza kuba nombulelo kunoma ubani ochazela encinane ngesihloko
awukwazi ukufumana ngayo olu hlobo isicelo, kuba ukuqhuba le ellipsoid, leyo kwi ukuphakama enye hayi kwi imodeli sezwe.
Emva uku rhweba ifayile google umhlaba KLM I ukuyifunda kwaye ungafumana kuphela zilungelelanise X, Y kodwa eziphakamileyo, okanye into eyenzeka nje ukufumana uququzelelo X, Y, Z? ukusebenzisa umhlaba google 5-0
HUMBERTO TAPIA uthi:
NDICINGA ukuba i-kml2sph INTO IMAHLE, KODWA INTO ENDIYIFUMANAYO KUKUFUMANA INDLELA YOKUZIFUMANA IZIQULATHO, KODWA KUHLANGANISA IMILINGO ENDINIKEZWA ngu-GOOGLE EHART, NGABA UMNTU UNENKQUBO ENCINANE
Antonio Ruiz uthi:
Isicelo esihle kakhulu sokuguqulwa kwe-KML ukuya kwi-SHP, nangona i-offset ye-8 imitha iyaxabiswa. Nangona kunjalo, zinokuba luncedo kakhulu. Ukubulisa
Nayiphi na iWindows, ukuguqula iifayile ze-dwg ngaphandle kokuba ne-AutoCAD
Ikhosi ye-PTC CREO yeParametric Course-Uyilo, iimpendulo kunye nokulingisa (3/3)
UCreo sisisombululo se-3D CAD esikunceda ukukhawulezisa ukuveliswa kwemveliso ukuze wenze ngcono ...
Kule khosi siza kugxila ekukhupheni ubuninzi ngokuthe ngqo kwiimodeli zethu ze-BIM. Siza kuthetha ngeendlela ezahlukeneyo zokukhupha ubungakanani usebenzisa ...
Imodeli yezikhukula kunye nekhosi yohlalutyo-kusetyenziswa i-HEC-RAS kunye neArcGIS
Fumanisa amandla e-Hec-RAS kunye ne-Hec-GeoRAS yokumisela imodeli yesiteshi kunye nohlalutyo lomjelo #hecras Le khosi esebenzayo ...